Fivarotana ambongadiny multifunctional tent Film PVC Transparent Tent Tent 3x6m Tent sy Greenhouse | Winsom
Latabatra sy seza mamoritra
Fialofana amin'ny fiara
Kitapo volotsangana ho an'i Sukkah
Sarona fiarovana amin'ny vanim-potoana rehetra ...
3-tier Walk-in mini greenh ...
Tunnel Green Film PE mora vidy ...
Extra Large High Quality Ch ...
Vola marobe Krismasy hazo S ...
Tent multifunctional PVC Film Transparent Party Tent 3x6m
10-29 sekely 30-49 Sombiny
> = 50 Pieces
$ 149.00 $ 139.00 $ 129,00
Ity lay fety ity dia lay misy karazany maro. Mety tsara amin'ny hetsika ivelany, toy ny fampisehoana, fampakaram-bady, lanonana. Azonao atao koa ny mametraka azy ao an-tokotaninao toy ny masoandro milentika sy mahafinaritra hamalifaly ny ankohonanao sy ny vahininao. Amin'ny additon, dia azo ampiasaina ho trano fandraisam-bahiny mandehandeha. Miankina aminao daholo izany.
1) rafitra vy, harafesina ary harafesina manohitra.
2) bokotra lohataona amin'ny tonon-taolana mba hikarakarana mora sy alaina
3) Sarimihetsika avo lenta mangarahara sy UV mahatohitra UV.
0.3mm sarimihetsika PVC
Fitaovana amin'ny sidewalls
Dia 42 * 1.2 / 38 * fantsom-by vy nandrisika 1.0mm
Fonosana baoritra matanjaka
10x20ft (3x6m) Sary an-tsary mahazatra
Mety amin'ny hetsika ivelany, indrindra mety hizarana dite atoandro amin'ny namanao. Sarimihetsika tsy mahazaka rano sy UV mahatohitra pvc ary fananganana vy tena matanjaka mahatonga azy io ho azo antoka sy azo antoka kokoa. Ary koa, we afaka mampiasa azy io ho trano fandraisam-bahiny hamboly voninkazo, legioma ary voankazo .Mba maniry izay tianao ianao. Ity tranolay sarimihetsika ity dia afaka miantoka ny zavamaniryo voaro amin'ny toetr'andro ratsy toy ny orana, ny rivotra ary ny lanezy.
Ny kalitaon'ny fitaovana amin'ity tranokala fety mangarahara ity no kilasy ambony. 38 * 1.0mm fantsom-boankazo nohamafisina, ary ny tonon-taolana 3 sy ny tadiny 4 dia 42 * 1.2mm nohamafisina ny firafitry ny vy, hiantohana ny fitoniana avo sy ny fanoherana ny rivotra an'ny tranolay manontolo.
Ho an'ny sarimihetsika PVC, ny hateviny dia tariby 30. Mangarahara ny horonantsary pvc, ka rehefa manatrika lanonana dite hariva na fety hetsika eny ivelany ianao miaraka amin'ny namanao, dia tsy vitan'ny hoe afaka mankafy fotoana mahafinaritra ianao, fa afaka mankafy ny toerana ivelany sy Masoandro mafana. Ny takelaka rehetra amin'ny tranolay dia azo esorina. Mora azo apetaka amin'ny fehy velcro fotsy sy baolina bungee.
Azo afindra mora foana ny sisin-dàlana sy ny varavarana. Misy baolina mitsambikina ao amin'ireo mpampifandray mba hampidirana ny fitombanan'ny endriny, ny tampon-trano sy ny sisin-trano dia miraikitra amin'ny vatan'ny baolina bungee fotsy.
Kalitao avo lenta, adidy mavesatra mavesatra. Rafitra telozoro tokana, mahatonga ny tampon'ny tampon-trano ho marin-toerana kokoa sy mafy orina.
Ny fantson-tongotra tsirairay dia miaraka amina fotony lehibe, izay afaka manatsara ny fahamarinan'ny tranolay. Ary koa, ny fantson-tongotra dia manana sarimihetsika amin'ny tongotra, izay afaka manome fiarovana tsara kokoa ny fantsona. visy amin'ny fantsom-tongotra mba hahatonga ilay sarimihetsika hifanaraka akaiky kokoa amin'ilay fantsona.
Teo aloha: Mandehandeha ao anaty akoho alika akoho mihazakazaka tranon'ny tranokely Kennel 4x3x2m
Manaraka: 6x12m Clear PVC Film Party Tent Transparent Film Greenhouse
Tranolay misy ny antoko
Tranolay fety mora vidy
Tranolain'ny antoko ivelany
Tranon'asan'ny antoko mariazy
Azafady mba omeo toro-hevitra ny habeny sy ny isan'ny tadiavinao, ary ny seranan-tsambo any amin'ny firenena akaiky anao, avy eo aho dia hanao vidin'ny CIF ofisialy ho anao.
10x20Ft (3x6M) tranokala mavesatra PVC Party Party
Trano mavesatra an-kalamanjana ho an'ny hetsika 5x8m
Tentin'ny antoko ivelan'ny trano trano 4x4m
Trano teti-piavian'ny hetsika 5x10m PE
Trano ho an'ny hetsika ambongadiny ambongadiny 6x12m
Fivarotana fividianana fetra mora vidy 13x20ft (4x6m)
6x12m Heavy Duty PVC Wedding Party Tent Amin'ny Fi ...
Tranoben'ny hetsika 3 × 3 mora vidy ivelany
CONSULTATION MAIMAIMPOANA 0086-15358204830
ADDRESS No.1 Tianyuan Rd, Zone Industrial Industrial, Dongtai City, faritanin'i Jiangsu, PRChina